Raad Raac News Online – (Sawiro)-Xafiis cusub ee Xeer ilaalin u gaar ah Tacadiga ku saleysan Jinsiga oo laga Daah furay Garowe.
(Sawiro)-Xafiis cusub ee Xeer ilaalin u gaar ah Tacadiga ku saleysan Jinsiga oo laga Daah furay Garowe.
Moos Bukeeni August 13, 2017 Comments Off on (Sawiro)-Xafiis cusub ee Xeer ilaalin u gaar ah Tacadiga ku saleysan Jinsiga oo laga Daah furay Garowe.
Magaaladda Garowe ee Xarunta Dowladda Puntland waxaa lagu qabtay shir muhiim ah oo soconayay Mudo laba cisho ah kaasi oo si rasmi ah loogu daah furayay Xafiiska Xeer ilaalin u gaar ah Tacadiga ku saleysan Jinsiga.
Madasha lagu daah furayay Xafiiskan ayaa waxaa ku sugnaa Xeer ilaaliyaha guud ee Dowlada Puntland Mudane Maxamuud Xasan Awcismaan iyo ku xigeenka Xeer ilaalaha Puntland Mudane Maxamed Xareed Faarax iyo Qubaro heer Caalami ah oo ka shaqeeyay Xafiiska QM ee Arimaha haweenka Qaabilsan.
Sidoo kale Xubnaha ka qeybgalayay Shirkan ayaa waxaa ka Mid ahaa Xeer ilaaliyayaasha Gobolada Puntland iyo Saraakiil mataleysay Laamaha Sirdoonka ee Dowladda Puntland.
Muhiimadda ugu weyn ee Xafiiskan loogu daah furay Garowe waxaa la sheegay inuu udoodi doono Xaquuqaha Dumarka uu Tacadiga uu ku dhaco.
Sidoo kale Daah furka Xafiiskan ayaa waxaa bar bar socday Tababar Muhiim ah oo ku saabsan sidii xubnaha xeer ilaaliyayaasha Gobolada Dalka u baran lahaayeen Arima dhowr ah oo ku saabsan ka hortaga dhibaatooyinka Tacadiga Jinsiga ku salaysan.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Dowladda Puntland Mudane Maxamuud Xasan Awcimaan oo ka hadlayay Daah furka Xafiiskan wuxuu sheegay in talaabo muhiim ah u tahay sidii loooga hortagi lahaa dhibaatooyinka Tacadiga ku saleysan Jinsiga.
Ku xigeenka Xeer ilaaliyaha Guud ee Dowladda Puntland Mudane Maxamed Xareed Faarax ayaa dhankiisa la dar daarmay dhammaan xubnaha ka qeybgalayay Tababarkan in ay dhuuxaan guud ahaan qodobada looga hadlay mudada uu tababarkan soconayay.